China Runjin © Krunt ™ -G4 Ice Cream mameno sy manamboatra milina | Runchen
Runjin © Krunt ™ -G4 Masinina mameno gilasy
Famenoana gilasy, sorbet ary vokatra ranomandry anaty rano ho lasa kônda, kaopy sy fitoeram-bokatra maro karazana endrika, endrika ary habe.
Ny kaopy, kônà na kaontenera be dia zaraina tsirairay avy amina antontan-tsinjara ary apetraka ao anaty lamela, vonona hameno.
Ny famenoana ny gilasy, sorbet na ranomandry misy rano dia amin'ny alàlan'ny mpameno fotoana lava, ny volumetric na ny mpameno extrusion. Raha ny gilasy misy extruded, dia tafiditra ao koa ny mekanika fanapahana.
Ny haingon-trano miaraka amina karazana viscous na marihitra isan-karazany dia azo atao ary misy karazana haingon-trano tsy voatery atao feno ho an'ny Runchen Krunt-G4.
Ny fonon'ny fonony dia azo isafidianana teknika maromaro misy, miankina amin'ny famolavolana ny vokatra, ary azo atao koa ny famehezana ny hafanana amin'ny alàlan'ny foil vita mialoha.
Aorian'ny famehezana sy fanakonana ireo vokatra dia nakarina avy ao amin'ny lamellas ary afindra amin'ny fehikibo mpampita. Rafitra fikirakirana mandeha ho azy, ohatra: unite transfer d'une-place dia misy.
Ny Runchen Krunt-G4 dia miorina amin'ny fefy vy tsy matevina. Ny milina famenoana dia natao hihaona amin'ny fenitra ara-pahadiovana avo indrindra, ao anatin'izany ny vatan-kazo misokatra feno izay misoroka ny vela-drano ary mamela ny fanadiovana hosoka. Ny fantsom-panafody ho an'ny fanadiovana lamella dia ampidirina ho fitaovana mahazatra ihany koa.
Ny rojom-bary tsy misy fangarony, rojom-pitaterana vy tsy misy fangarony miaraka amin'ny haavon'ny 70mm dia mitondra ny lamela izay apetaka amin'ireo rojo vy amin'ny alàlan'ny visy "hidy haingana" ho an'ny fanovana mora.
Ny gara miasa ambony rehetra dia mifamatotra amin'ny lalamby, tsy manamboatra lavaka izay ahafahan'ny fametrahana mora sy haingana ny gara raha tsy mampiasa fitaovana.
Ny famenoana rehetra, ny haingon-trano sy ny fitaovana fanampiana fanampiny ao anatin'izany ny mozika, ny fantsom-pifandraisana, ny fiantsonan'ny fiara sns dia natao ho an'ny fahatapahana tsotra sy haingana ho an'ny fanovana vokatra mora sy fanadiovana mandaitra. Ny milina dia misy amin'ny alàlan'ny fefy fanoratana roa samihafa. Ny masinina misy haavon'ny fanondroana 140mm dia ho an'ny vokatra kely kokoa, ny masinina miaraka amin'ny haavon'ny fanondroana 210mm dia afaka mitantana kaontenera lehibe sy haben'ny fianakaviana. Tsy takiana ny manova rojo rehefa manova karazana lamela samihafa.
Main Drive rafitra
Ny motera miambina matetika dia mitondra ny cam lehibe manetsika ny kaopy na ny dispenser sy ny ejector. Ny hetsiky ny mpampita ny lamella dia ampifanarahana amin'ny fiara amin'ny alàlan'ny mekanisma fanoratana.
Ny encoder dia manome fambara amin'ny PLC amin'ny fifehezana marina ny hetsika ampandehanan'ny rivotra.
Runchen Krunt-G4 dia fehezin'ny alàlan'ny rafitra fanaraha-maso PLC afovoany. Ny PLC dia ahafahana mahazo fanaraha-maso marina kokoa sy fanovana eo anelanelan'ny vokatra. Ny PLC dia mamela ny fanombohana sy fanakatonana mandeha ho azy, ary miaraka amina habaka fitahirizana data 2MB izay ahafahan'ny vokatra maromaro voalamina mialoha.
Ny angon-drakitra vokatra dia aseho eo amin'ny tontonana fanaraha-maso mba hahamora ny fandidiana sy ny fanaraha-maso.
Rafitra mifehy ny rivotra sy ny rivotra
Noho ny antony ara-pahadiovana dia namboarina ho fitaovana manohitra ny lozisialy sy tsy misy fanosorana ny singa pneumatika rehetra. Valve rehetra dia valves azo ampiasaina amin'ny herinaratra ary atsangana ao anaty kabinetra vy tsy misy fangarony ambonin'ilay milina.
Ny banga ilaina amin'ny famoahana kaopy, kaontenera ary fonosana dia azo amin'ny alàlan'ny valves venturi.
Masinina fanampiny tombony
Mba hiantohana ny fiasan'ny masinina, ny milina famenoana Runchen Krunt-Z12 dia tokony ho tsara kokoa ny misafidy kojakoja am-boalohany. Raha misafidy ny hafa dia mety hanana singa tsy marin-toetra ireto, mitarika vaky fitaovana. Azafady mifampidinika alohan'ny hampiasana.
Rafitra maharitra sy maharitra kokoa
Ny halavan'ny masinina dia mitatra amin'ny 5m mba hanomezana toerana bebe kokoa ho an'ny fiasan'ny tanana ary toerana bebe kokoa ho an'ireo toeram-piasana fanampiny. Ny fanohanana ny rafitry ny masinina dia mitombo hatramin'ny 4 ka hatramin'ny 6, izay manamafy ny tanjaky ny milina ho an'ny fihazakazahana mihazakazaka.
Servo Motor Drive ho an'ny gara famenoana
Siemens S7-300 PLC dia fitaovana amin'ny milina mahazatra, servo maotera servo ho an'ny toeram-pamenoana azo ampiana tsy misy fanovana fanampiny. Ny hetsiky ny famenoana dia azo alain-tahaka amin'ny alàlan'ny tontonana fandidiana mba hanahafana ireo karazana cam curve, ny tahirin-tsarimihetsika dia azo tahirizina sy azo averina. Izany dia mahatonga ny fanovana ny vokatra sy ny fanavaozana tena mety.
Fanaraha-maso ny maripana amin'ny rafitra sôkôla
Ny rafitra fanafanana sy ny rafitra fanaraha-maso ny maripana ho an'ny rafitra fanondranana sôkôla sy ny rafitra fanatobiana dia famolavolana mahazatra hisorohana ny sôkôla miraikitra amin'ny mari-pana ambany.
Ny singa fanitsiana fonosana fanampiny dia natsangana mba hanatsarana ny fahamendrehan'ny fihenam-bidy mba hahazoana antoka ny kalitaon'ny vokatra.
Ny milina famenon'ny Runchen Krunt-G4 dia azo omena fitaovana samihafa ho an'ny kaopy, kônta na famenoana kaontenera. Ireo fenitra napetraka ho an'ny karazana vokatra tsirairay dia voatanisa etsy ambany:
Fanamafisana ny kônina
Dispenser ny amboara
Famenoana kaontenera be dia be
Mpanjifa lehibe / fitoeran-javatra
Doseran'ny gilasy 2 misy tsiro miaraka amin'ny servo drive
2bypass valves topy saosy
Toeram-paompy 2 set
Taratasy fangatahana cone
Mpanatitra ho an'ny cone
Valve bypass 2Dispenser
Fanindry ny sarony
Ho fanampin'ny fitaovana mahazatra, karazana fitaovana tsy voatery atao maro samihafa no azo ampiasaina amin'ny famoahana, famenoana sy fanaingoana. Izany dia ahafahana mamokatra vokatra marobe.
Doser ho an'ny gilasy 2 misy tsiro ny famenoana concentric
Doser raha mahaliana gilasy 2 mameno savovo
Doser ho an'ny gilasy famenoana twister
Doser ho an'ny gilasy miaraka amin'ny fampidirana azy
Fitaovana haingon-trano Fenitra pensilihazo
Mpitafa amin'ny fehin-kibo Fitaovana haka sy fametrahana toerana
Famenoana fantsom-panafody ao anatin'izany ny fitaovana fanapahana ho an'ny fanapahana mangatsiaka: singa fanamafisana azo ampiasaina amin'ny fanapahana tariby
Fitaovana ripple mihodina ho an'ny extruder
Vita haingon-trano Fenitra pensilihazo Volumetric filler Liquid doser
Vovon-tsavony kôkô mpanafy siligaoma fametahana tombo-kase hafanana
Sarony tsy misy rindrina ho an'ny sarom-baravarana tsy miangona Non fitaovana tsy azo sintomina
Lid spinner Date coding Mpampita outlet
Fitaovana haka sy hametrahana
Doser ho an'ny ranomandry 2 tsiro ny famenoana mifanila
Tombo-kase hafanana - foil efa voapaika Dôpetra famoahana kopia dispenser
Fandefasana daty fanoratana daty
Mba hiantohana ny fahombiazan'ny masinina dia asaina mampiasa ireo faritra tany am-boalohany izay azo baikoina mora foana arakaraka ny boky torolàlana. Mba hanampiana ny mpanjifa hanatsara ny tahiry amin'ny faritra misy azy, ny milina famenoana Runchen Krunt-G4 dia natao hampiasa ny ankamaroan'ny faritra mifanentana eny an-tsena, ao anatin'izany ny lamila miisa 140mm, ny toeram-piasana, ny ampahany amin'ny rafitra, ny faritra mitondra fiara, ohatra ny sprocket sy rojo, singa fanafana. sns.Saingy soso-kevitra mafy hamafisina amin'ny Runchen alohan'ny hampiasana ireo singa mifanentana mba hialana amin'ny fahasimbana an'ny milina.
No. ny sakeli-dalana etoFitaovana fanoratana Index output mahazatra (pcs / h) Isan'ny gara Hafainganana mekanika (stroke / min) Max. haben'ny vokatra kônô Cone lamella No.
Vokatra mahitsizoro: mm
santimetatra Rectangle cup lamella
Max. Prod. haavony: Cup
4 andalana140 / 5.5 "1030030
Làlana 3140 / 5.5 "760030
Làlana 2140 / 5.5 "520030
Làlana 3280/11 "480020
Làlana 2280/11 "340020
Andalana 1280/11 "210020
Fitaovana sôkôla Hamafin'ny fitoeran-tsakafo Dosis isaky ny singaVolavola firakotra 14Litre （3.7 US Gals） × 2 2-6ml (0.07-0.20 fl. Oz.)4-8ml (0.14-0.28 fl. Oz.)
※ Ny fahaizan'ny tena izy dia miankina amin'ny lafin-javatra maromaro, ao anatin'izany ny endrika sy ny habetsaky ny vokatra ary koa ny fomba famenoana sy famehezana.
Fiasa fanerena miasa
Motera lehibe Servo motera Filler mihodina
Fanamafisana ny fantsom-pifandraisana
mahazatra tsy voatery
fenara fenitra fenitra fenitra fenitra
Tsy misy atiny solika, atin'ny rano ≤ 2.0g / cu.m 6bar (87 psi)2.5 cu.m / min 3 × 380V / 50Hz
Fifanitsiana Lamellas mahazatra
[A1] vokatra 140 fihodinana 4 mihodina [B1] 140 mivelatra vokatra mahitsizoro 4 lane
[A2] vokatra 140 manodidina ny lanja 3 [B2] 140 namelatra vokatra telozoro 3 andalana
[A3] 140 mivelatra vokatra manodidina ny 2 lane [B3] Haavo 140 ny vokatra mahitsizoro 2
[A4] vokatra 280 milahatra manodidina ny 3 [B4] vokatra 280 ny kianja filaharana 3lanes
[A5] vokatra 280 milahatra manodidina ny 2 [B5] Vokatra mahitsizoro 2 milahatra 20
[A6] vokatra 280 milahatra manodidina [B6] vokatra 280 naorin'ny kianja iray
※ [A1] lamellas no fanamboarana default ho an'ny masinina mahazatra, ny tobin-tsolika misy fitaovana dia mifanaraka amin'ny lamila [A1] ihany koa.
※ 140mm na 280mm lamellas dia misy ihany koa araka ny fangatahan'ny mpanjifa.
Lam 210mm pitch lamellas sy rojo dia misy araka ny fangatahan'ny mpanjifa
Mpanjifa Cone & CupFampisehoana marin-toerana, tsy misy simba ny fitaovana famonosana.
Presser sy Chocolate ChocolateFanamasinana fanamiana, fanaraha-maso mahomby. Fanafanana amin'ny tsipika fiverenana sy ny vazivazy mba hialana amin'ny sôkôla miraikitra.
Servo Drive ho an'ny rafitra famenoanaVovona sy tabataba ambany, maimaim-poana. Ovay fotsiny ny angon-drakitra amin'ny alàlan'ny tontonana fanaraha-maso ny fanavaozana ny vokatra vaovao tsy misy sarany fanampiny.
Previous: Runjin © Krunt ™ -Z12 Z12 Ice Cream Rotary Filling Machine
Manaraka: Runjin © Krunt ™ -N50 Milina fanala gilasy